Daawo Cadaymo Turkidda oo Dekadda Muqdisho ka billaabay inay qasab ugu galmoodaan Gabdhaha u shaqeeya. – Hornafrik Media Network
By HornAfrik	 Last updated Nov 30, 2017
Shirkadda Albayrak oo Maamusha Dekadda Muqdisho ayaa billowday inay Gabdhaha Soomaalida ah ee u shaqeeya ku qasbaan inay si qasab ula galmoodaan, iyagoo u adeegsanaya Awood.
HornAfrik ayaa sheekadan markii ay ogaatay waxay ku samaysay Dabagal, waxayna la hadashay qaar ka mida Gabdhaha u shaqeeya Albayrak iyo kuwa Shaqadda laga eryay markii qasab loogu galmooday, kuwaasoo sheegay inay dacwoon doonaan.
Gabadha La Kufsaday
Sacdiyo oo ah Gabar Soomaaliyeed oo aan Magaceeda oo buuxa qarinay, iyo Wajigeeda waxay u shaqaynaysay Shirkada Albeyrak, Waxaa ugu wacay Xafiiskiisa Yücel Çakır oo ka mida Masuuliyiinta Shirkadda Turkiga ah ee Albayrkak, kadibna waxa uu ku xirtay Xafiiska markii ay soo gashay, isagoo Qasab ula galmooday, Waxayna waliba Gabadha isku dayday inay uga baxsado Duruufo Haweeneed oo ay sheegatay inay qabto Dhiigga Caadada Dumarka, balse taas ma aysan noqon mid celisa. Waxaana uu sii watay howshiisa. Kadibna waxaa Qolka soo galay oo wax ka ogaa Sheekadan Ninka ka sareeyay oo lagu magacaabo Fatih Yılmaz kaasoo isna dhiniciisa uga galmooday Sacdiyo oo halkaasi ku waysay Gabarnimadeedii.
Sacdiyo waxay falkan ka hor kala kulantay Hanjabaado dhowr ah Yücel Çakır,
taasoo ku qasabtay inay qabto Feejignaan dheeriya, Waxayna u gashay Xafiiska, iyadoo Kaamiradda Taleefoonkeedu u diyaarsan yahay Muuqaal duubis, Waxayna duubtay dhamaan wixii dhacay oo Muuqaal ah, iyadoona nala wadaagtay Muuqaalkaasi oo aan Anshax ahaan u qarinay inaan idin la wadaagno.
Markaas kadib Sacdiyo waxay ku wargalisay inay hayso Muuqaalkaasi Cadaynta ah, isla markaana ay Fadeexayn doonto, balse waxa uu isku dayay inuu u hanjabo Gabadha, isagoo u diray Fariin Qoraaleedyo kala duwan oo uu ugu sheegayo inuu dilayo haddii ay Muuqaalkaasi baahiso, Waxa uu sidoo kale la hadlay Gabdho kale oo ka mida Shaqaalaha Shirkadda oo lagu kala magacaabo Aasiyo iyo Faadumo, kuwaas oo uu ka dalbaday inay arrintan xaliyaan, isagoo sii raacinaya Hanjabaado, Wuxuuna u qirtay Gabdhahaasi in Qalad dhacay uu yahay oo uu qiranayo, balse haddii aysan qarin uu adeegsan doono Booliska iyo Nabadsugidda oo tallaabo ka qaadi doona Sacdiyo.
Ku Simaha Taliyaha Nabadsugidda, Jaamac oo xiriir wanaagsan la leh Turkidda ayaa ugu hanjabay sidoo kale Gabdhahan haddii aysan qarin sheekadan inuu ka qaadi doono Tallaabo, Waxa uu waliba si toos ah ula hadlay Jaamac Gabadha lagu magacaabo Sacdiyo ee loo gaystay falka Anshax Xumadda.
Sacdiyo oo hadda waysay Gabarnimadeedii waxay ku nooshahay Duruufo adag oo isugu jira Mustaqbalkeedii oo la lumiyay, Hanjabaado la xiriira Nolosheeda oo si is daba joog ah u soo gaaraya, iyo iyadoo aan haysan Cadaalad ka jawaabta wixii lagu sameeyay, Waxaa u sii dheer Masuuliyiintii Amniga ee ay ka sugaysay inay u hiiliyaan waxay kala safteen Turkida, iyagoo fiirsanaya Danahooda Gaarka ah.
Turkiga oo ah Dal u soo gurmaday Somalia xilli adag waxa uu ku wayn yahay Quluubta Dadka Soomaaliyeed, Laakiin Ficiladan Xun Xun waa kuwa u gaar ah Shaqsiyaad Turky ah oo aan lahayn Damiir Islaanimo iyo Mid Bini’aadanimo oo qayb ka ah Shaqaalaha Turkidda ee Somalia ka howlgala.
Halkan ka dhagayso Codadka laga duubay Yücel Çakır iyo Fatih Yılmaz